Kukwanisa kubereka, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve 3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine (83255-86-1) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
Nhamba ye3,4-disubstituted pyrazolo [3,4-d] pyrimidine ribonucleosides yakagadzirwa uye yakaedzwa nokuda kwebasa rayo. Glycosylation ye persilylated pamwe neyonsilylated 3-bromoallopurinol ne 1-O-acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-D-ribofuranose (4) iyo yakaisa mukati mechikamu 3-bromo-1- (2,3,5-tri-O-benzoyl- β-D-ribofuranosyl) pyrazolo [3,4-d] pyrimidin -4 (5H) -one (5a). Saizvozvowo glycosylations ye3-cyanoallopurinol uye 3- (methylthio) allopurinol yakapa zvinokwana zvakachengetedzwa zvinonzi N-1 glycosyl derivatives (5b uye 5c). Debenzoylation yeyi nucleosides (5a-c) yakapa 3-bromo, 3-cyano-, uye 3- (methylthio) allopurinol nucleosides (6a-c). Nzvimbo ye glycosylation uye anomeric configuration ye 6a ne6c dzakagoverwa maererano neshanduro dzepirat uye pamwe nekushandura ku allopurinol ribonucleoside, asi basa rakagadzirirwa re 6b rakaitwa ne-single-crystal X-ray kuongorora. Kushandurwa kweboka rinoshandiswa kweboka re5a uye 5b rakapa nhamba yakaverengeka yeA3-yakashandurwa allopurinol nucleosides, iyo yaisanganisira 18a-d. Glycosylation ya 4-amino-3-bromopyrazolo [3,4-d] pyrimidine ne4 uye debenzoylation yakatevera yakapa 3-bromo-4-aminopyrazolo [3,4-d] pyrimidine ribonucleoside iyo 3,4-dino-β-D-ribofuranosylpyrazolo [3,4-d ] pyrimidine yakagadzirwa nokumutsa. Kutorwa kwe5b, kwakateverwa nokudengenyeka, kwakapa 3-cyanothiopurinol ribonucleoside (20). Zvose izvi zvinowanzoedzwa mu vitro maererano nemamwe mavharusi, tumoramu masero, uye maruva anonzi Leishmania tropica. Pakati pe3-yakashandurwa allopurinol nucleosides, 18b uye 18c vakaratidza chiitiko chakakonzera kupararira kwePara 3 uye vakawanikwa kuti vane simba rekudzivirira kweL1210 neP388 leukemia. Chigadzirwa 20 chakaratidza chinonyanya kukosha mumashiripiti emishonga antiviral uye antitumor. 3-Bromoallopurinol ribonucleoside (6a) yakaratidzwa kuva yakashanda kupfuura allopurinol ribonucleoside neLeishmania tropica mukati me macrophage vanhu mu vitro.
MDL Nhamba MFCD12196922
Kemikari Zita kana Nyaya 3-Bromo-1h-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine
Physical Form Powder kana Chunks
Molecular Weight (g / mol) 214.026
Melting Point 350 ° C (lit.)
3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine (83255-86-1) Kuchengeta nekubata
(83255-86-1) Tsanangudzo yenjodzi:
• Zvinokonzera kutsamwa kweganda
• Zvinokonzera kushungurudzika kweziso.
3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine Kuchengetedza zvinyorwa:
♦ Kushambidza maoko uye chiso chakanaka mushure mokubata.
• Shfeka magasi ekudzivirira, kudzivirira kweziso
♦ Kana iri paganda: Shamba nesipo yakawanda nemvura. Kana kushungurudzwa kweganda kunoitika: Tsvaga mazano ekurapa kana kutarisirwa. Bvisa zvipfeko zvakasvibiswa uye uzvishambidze usati washandisazve.
♦ Kana ari maziso: Isai zvakanaka nemvura kwemaminitsi akawanda. Bvisa manotsi lenzi, kana zviripo uye zviri nyore kuita. Rambai muchigadzira. Kana kushungurudzwa kweziso kuchiripo: Tsvaga mazano ekurapa kana kutarisirwa.
Bromopyrazolo [3,4-d] pyrimidine 2'-deoxy-2'-fluoro-β-D-arabinonucleosides: Modified DNA yakaitwa neshuga yakasimba zvakanyanya N-conformation
Nyaya ye Organic Chemistry 2003
Synthesis, anticancer evaluation, uye masvomomu ekuongorora zvinyorwa zveimwe nhoroondo 4,6-disubstituted pyrazolo [3,4-d] pyrimidines se cyclin-dependent kinase 2 (CDK2) inhibitors
3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine (83255-86-1) Kurayira Kuwanda uye Mutengo:
1 Kudzokorora nokuti 3-bromo-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine (83255-86-1)
Pa APICMO, tinogadzira uye tinobudisa yakawanda ye3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine, pakati pemamwe makemikari. Zvitengesi zvedu zvinoteerera mitemo ye federal uye CGMP mitemo yekutengesa.
Ichi chikemikari chinowira pasi pezvikamu zveheterocycles, nucleosides, pyrimidines, pyridines, uye zvivakwa zvavo zvakafanana. Inobatsira pakutsvakurudza, kubudirira, kana kubudisa.
Kemikari zita 3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine
IUPAC zita 3-Bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine
CAS inokosha Min% - 97
Max% - 100
Synonyms · 3-Bromo-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine
· 1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine, 3-bromo
· 3-bromo-1H-pyrazol [3,4-d] pyrimidin-4-amine
Molecular weight (g / mol) 214.0228
Muviri wehumu (g / mol) 214.023
Monoisotopic mass (g / mol) 212.965
Chimiro chemuviri Zvinyorwa zvakasimba kana poda
Ikemikari yakachena 97%
Kuwanda kwevanhu (g / cm3) 2.14
Pfungwa inoputika (˚C) 350 ° C
Kemikari uye Zvimwe Zvisikwa zve3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine
Hydrogen bond Acceptor count - 5 units
Mupiro wezvipo - 3 diyuniti
3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine inowanika mufomu yeupfu kana yakasimba chunk.
Chigadzirwa chacho chinonzwisa chiedza, kupisa, uye unyoro. Kana ichitaura kune chero ipi zvayo mamiriro aya, 3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-inogona kuora.
Misa chaiye (g / mol) 212.965
Topological polar surface area 80.5 A ^ 2
Molar volume (cm3) 100
Molar refractivity (cm3) 44
Surface mhirizhonga (dyne / cm) 117.8
Kunyanya kukwana (g / ml) 2.14
Zvishandiso zve3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine
Mishonga yemishonga yakadai sekudziviswa kweSrc kinases
Chigadzirwa chekutsvakurudza nekuvandudza
Synthesis yemamwe makemikari
Njodzi dzinobatanidza Nekushaya Masimba kwe3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine
3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine inogona kuva nengozi kumutano wevanhu. Nokudaro, inofanira kutarisirwa nemutsvakurudzi ane ruzivo kana pasi pekutariswa kwepedyo kweyanyanzvi. Heano mamwe ematambudziko ekushandura chigadzirwa chacho:
Zvinokonzera mishonga yeganda kana yakanyatsobatana nemuviri
Ziso rakanyanya kutsamwa kana kukanganisa zvachose
Zvinokuvadza kumutsipa wekupumha kana ukabatanidzwa
Inotyisa kana ikamedza
Zvokuchengetedza Zvingaitika Kana uchibata ne 3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine
1. Panguva Yokubata Chimiro
Paunenge uchishanda na3-Bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine, cherechedza zvinotevera:
Shanda mune imwe nzvimbo yakanyatsokonzerwa nemhepo
Pfekai zvipfeko zvekudzivirira kuti ufukidze muviri wako wose kusanganisira maoko, tsoka, ganda, uye chiso kuti usasangana nechinangwa
Usadya, kuravira, kana kunwa chero chinhu pane laboratori
Shandisa kemikari fume chamber
Mushure mokushanda tsvakurudzo dzenyu, kubudirira kana chigadzirwa, funga zvinotevera:
Chengetedza kemikemikari yakasara mumudziyo wakavharwa zvakasimba
Inzvimbo yekuchengetedza inofanira kuva yakanaka uye yakaoma
Dzingai chigadziko kana kuti mugumo wezvigadzirwa maererano nehurumende kana yepamutemo mitemo inotungamirira kuparadzwa kwemarara
Geza maoko ako uye chiso chako nemvura yakakwana
Bvisa pane nguo dzakasvibiswa usati watorazve
Geza uye gadzirisa bhenji rekushanda
3. Kana isiri muKushandiswa
Kana usingabatsiri, cherechedza zvinodzivirira pasi apa:
Chengetera pasi pemhepo yakadzika yakadzika, zvichida mufiriji
Chengetedza ichivharirwa mumudziyo wakavharwa zvakasimba
4. Zvimwe Zvokudzivirira Zvokushandisa
Nguva dzose uchengetedze muviri wakakwana kudzivirira kuderedza ngozi dzinogona kuitika kana ngozi.
Isai magirazi ekuchengeteka kuti murege kudzivirira 3-Bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine kana zvayo-michina yekupinda mumeso uye kukonzera kutsamwa.
Kupfekedza sutu yakazara kuti ufukidze chikamu chakapfeka chenyama.Puti pamabhuruku kana musina kupfeka uye makemikari asingadziviriki.
Kupfekedza zvakakodzera chiso chemasikisi nemhepo-kuchenesa zvigadziro kubudisa guruva, mhute, mafungu, kana chimwe chinhu.
Kuti udzivirire kuputika kwemhepo inokuvadza, iyo inogona kuvhiringidza nzira yekufema, funga kuisa mupiritsi neHEPA filters.
5. Kutanga Kubatsira Maitiro
Izvi zvinotarisirwa kunetseka zvinofanira kupiwa pakarepo mushure mokunge zvikaitika. Zvisinei, havatombotori nzvimbo yekutarisira kurapwa. Kana zviratidzo zvichiripo, funga nezvekushanyira chiremba.
Kuti upe rubatsiro rwekutanga pane nguva, laboratori yako inofanira kuve yakagadzirirwa nekuchengetedzwa kwekuchengetedza, kemikemikari yomukati, kupedza kuputika kwemazamu, uye kushamba kweziso.
Shenesa nzvimbo yakagadziriswa nemvura yakawanda ine mvura uye sophorera zvishoma pamusoro pemaminitsi e10. Mvura inofanira kunge inotonhora. Kana kutsamwa kana kuora kunopfuurira, tsvaka mazano emishonga.
Enda kune imwe kamuri rine hewa yakakwana kana nzvimbo yakazaruka ine simba guru rekupa. Kana munhu akabatwa nematambudziko mukufema, anoisa mumhepo yakasati vasati vatsvaga kurapwa.
Shamba muromo zvakakwana nemvura yakakwana yechando kwemaminitsi anoverengeka. Iwe unogonawo kunwa mvura yakawanda. Kana zviratidzo zvichiripo, tsvaka mazano kubva kumishonga.
Kana iwe uine majekiti ekubvisa, usabvisa vasati vashamba maziso nemvura yakakwana kune maminitsi 10.
6. Kuchengetedza nekubata
3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine inofanira kushandiswa nenyanzvi inoziva nezvezvipingamupinyi zvinosanganiswa uye kuti vanogona sei kuzvidzivirira. Nguva dzose ufuke zvakagadzikana zvemuviri zvakakodzera maererano nehutano hwehutano hwehutano uye ushande mune imwe nzvimbo ine nzvimbo yakakwana yekudzivirira.
Dzivisa kuvhiringidza guruva kana mhepo yakabudiswa nemakemikari. Chimwe chezvinhu zvinopisa zvinokonzerwa ne3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amineare hydrogen bromide uye bromine, iyo inotyisa kana inoputika. Mhepo inopisa zvose maziso uye nzira yekufema.
Chengetedza 3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine isimbi yakavharwa zvakasimba uye inoivhara munzvimbo yakachengeteka nepamhepo yakawanda. Ichengetedze kunze kwekusvika kwevashandi vasingabvumirwi.
7. Kuramba uye Kubudirira
3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine inonzwisisa chiedza, kupisa, uye unyoro.
8. Kupisa moto kunodzora
Kana icho chigadzirwa kana chipiri chemikemikari ichikonzera moto, bvisa murazvo uchishandisa kabhoni dioxide, doro, yakaoma yehuta kana polymer mutezo. Shandisa zvipfeko zvinodzivirira panguva yekushisa moto. Pasi pane mamwe emiti inopisa ye3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine:
Oxides ye nitrogen
Kana uri muhutano hwakasimba, nyora zvinyorwa uye udzire zvakakodzera. Paunenge uri mumvura yakachena, usarega ichiyerera pasi pemvura kana imwe nzira. Bvisai tsvina nemafuta anogadzirisa, bvisai mudziyo maererano nemirairo yekurasa, geza bhenji rekushanda, uye ventilate iyo.
Dzinga 3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine maererano nemunharaunda, mamiriro ehurumende, kana hurumende, inoshandisa nzira yemakemikari yakasara.
11. Kutumira mashoko
Hapana hutano hunozivikanwa hwekutakura 3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine kana pasi kana mhepo.
3-bromo-2H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-amine inopindirana nemitemo yehurumende uye yezvematongerwo enyika inodzora chikombiyamu chikamu, uye haipfuuri nepamusoro yepamusoro yeCAS reporting level maererano neSARA musoro III mitemo.
National Centre For Biotechnology Information, US. National Library Of Medicine, Pubchem, 3-Bromo-2H-Pyrazolo [3,4-D] Pyrimidin-4-Amine, Zvikamu 1-10.
Volkan Kisakürek, M. Volkan Kisakürek, Maonero muNucleoside uye Nucleic Acid Chemistry, peji 1-5
Office of Toxic Substances, United States. Environmental Protection Agency. Office of Pollution Prevention and Toxics - 1995, peji 56